थप समाचार Archives - Page 51 of 4214 - Himalkhabar.com
बलात्कारका फरार अभियुक्त पक्राउ बुधबार, भाद्र २३, २०७२ दमक–१७, सानोबाह्रघरेका गोवद्र्धन अधिकार (४६) लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । विस्तृत
बुधबार, भाद्र २३, २०७२ राप्रपा नेपाल पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग हुने संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुने भएको छ । विस्तृत
बुधबार, भाद्र २३, २०७२ लक्ष्मण थारु भैरहवाबाट पक्राउ मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण थारुलाई प्रहरीले भैरहवाबाट पक्राउ गरेको छ । विस्तृत
मंगलबार, भाद्र २२, २०७२ सिरहामा बम विस्फोट सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा २२ भदौ साँझ बम विस्फोट भएको छ । विस्तृत
मंगलबार, भाद्र २२, २०७२ क–कसले पाए निजामती सेवा पुरस्कार ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । विस्तृत
मंगलबार, भाद्र २२, २०७२ बगानबाट चियाको कपसम्म आइपुग्दा (फोटो फिचर) चिया बगानको हरियो मुनाबाट हामीमध्ये धेरै जसोले दिनहुँ पिउने चिया बनाउँदासम्मका चरणहरु हेरौं । विस्तृत
मंगलबार, भाद्र २२, २०७२ सञ्चारिकामा पुनः शर्मा सञ्चारिका समुहको छैटौं महाधिवेशनबाट निर्मला शर्मा अध्यक्षमा विजयी भएकी छन् । विस्तृत
सोमबार, भाद्र २१, २०७२ पाँच दिनका लागि बन्द खुल्यो थरुहट/थरुवान प्रदेशको माग गर्दै थरुहट संघर्ष समितिले २८ दिनदेखि बन्द गर्दै आएको बर्दिया पाँच दिनका लागि खुलेको छ । विस्तृत
सोमबार, भाद्र २१, २०७२ उत्तेजक गतिविधिमा संलग्न नहुन कार्यकर्तालाई एमालेको निर्देशन सामाजिक सद्‌भाव बिथोलिने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन नेकपा एमाले इलामले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । विस्तृत
सोमबार, भाद्र २१, २०७२ शून्य लागतमा कामदार लैजान मलेसिया सरकार सकारात्मक मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले नेपाल सरकारको शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णयमा मलेसिया सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । विस्तृत
आइतबार, भाद्र २०, २०७२ ‘छोरो खाने संघीयता’ संयुक्त मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताबाट मारिएका नौवस्ता–२, बाँकेका करण सिंहकी आमा रुँदैरुँदै जिल्ला प्रशासन आइन् । विस्तृत
आइतबार, भाद्र २०, २०७२ परीक्षाफल प्रकाशित मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह ९एमए० दोस्रो वर्ष ९२०७०० को राजनीति शास्त्र विषयको ९सोधपत्र बाहेक० परीक्षाफल प्रकाशन भएको छ । विस्तृत
आइतबार, भाद्र २०, २०७२ थरुहट तराई पार्टी संविधानसभाबाट बाहिरियो दुई जना सभासद रहेको थरुहट तराई पार्टीले संविधानसभाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको छ । विस्तृत
आइतबार, भाद्र २०, २०७२ अन्तिम बनोस् अनशन माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका विषयमा गरिएको ११ बुँदे सम्झौता अक्षरशः पालना गरेर सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई सातौं पटक अनसन बस्ने अवस्था नै आउन दिनु हुँदैन । विस्तृत
शनिबार, भाद्र १९, २०७२ इलाममा तीनजनाको निसासिएर मृत्यु इलामको श्रीअन्तुमा सुतेको अवस्थामा निसासिएर तीन जनाको मृत्यु भएको छ । विस्तृत
शनिबार, भाद्र १९, २०७२ संविधानको विधेयकमा तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता तीन प्रमुख दलले संयुक्त रुपमा संविधानको विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विस्तृत
शनिबार, भाद्र १९, २०७२ लमजुङको शान्ति उमाविमा आगलागी, सवा करोडको क्षति लमजुङको सुन्दरबजार–१३ कुन्छास्थित शान्ति उमाविमा गए राति आगलागी भएको छ । विस्तृत
शनिबार, भाद्र १९, २०७२ लिम्बुवानले गरेको बन्द फिर्ता कार्यकर्ता पक्राउको विरोधमा पूर्वका नौ जिल्ला अनिश्चतकालीन बन्द आह्वान गरेको संघीय लिम्बुवान पार्टीले बन्द फिर्ता लिएको छ । विस्तृत
शनिबार, भाद्र १९, २०७२ वीरगञ्ज तीन घण्टा गुलजार (फोटो फिचर) वीरगन्जमा ६ दिनदेखि जारी कर्फ्यु १९ भदौं विहान तीन घण्टाका लागि हटाईए पछि नगरक्षेत्र गुलजार देखियो । विस्तृत
« First«1020304950515253607080»Last »